Vaovao Samihafa Archives - Page 184 sur 215 -
Fanamboarana kopia : NOMENA ALALANA NY LEHIBEN’NY DISTRIKA
Ny lisitry ny mpifidy sy ny kara-panondrom-pirenena amin’ny ankapobeny dia tokony ho laharam-pahamehana amin’ny tanjona hotratrarina amin’ny hisian’ny demokrasia sy mangarahara. Tanjona ho tratrarina ihany koa entina hanatratrarana ny ho 10 tapitrisa ny isan’ny mpifidy …Tohiny
Ady amin’ny kolikoly : NANAO FANAMBARAM-PANANANA NY CENI
Anatin’ny fiantohana ny mangarahara ataon’ny Ceni dia nisy ny fanambaram-pananana nataon’ny mpikambana ao amin’ny Ceni, omaly, teny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalam-panorenana. Miisa 9 izy ireo no nametraka ny antontan-taratasy mirakitra ny fanambaram-pananany. Izany …Tohiny
Fanambaram-pananana : MIALANGALANA IREO LEHIBEN’NY FARITRA
Manao bemarenina sa manao fanahy iniana? Araka ny vaovao, mbola vao lehiben’ny Faritra iray amin’ireo lehiben’ny Faritra 22 manerana ny Nosy no nahatontosa ny fanambaram-pananana teny anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC). Voalaza mantsy …Tohiny
Tetibolan’ny Kaomina : TAFAKATRA 47 MILIARA ARIARY
Nifarana ny talata 10 Janoary 2017 ny fivoriana ara-potoana izay nataon’ny mpanolontsaina Monisipaly notontosaina tao amin’ny Lapan’ny tanàna momba ny fandaniana ny teti-bola ampiasaina ny taona 2017. Tsy maintsy nodinihana tao anatiny 10 andro izany …Tohiny